Vaovao - Misotro rano avy amin'ny ranomasina
Ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampandrosoana haingana ny indostria manerantany sy ny fambolena dia nahatonga ny olan'ny tsy fisian'ny rano velona mangatsiaka kokoa, ary mihombo hatrany ny famatsiana rano madio, hany ka ny tanàna amoron-tsiraka sasany dia tsy ampy rano ihany koa. Ny krizy amin'ny rano dia mitaky fangatahana mbola tsy nisy toa izany noho ny fanesorana ny ranomasina. Fitaovana fanamorana ny membrane dia dingana iray izay hidiran'ny ranomasina amin'ny alàlan'ny fonosana boribory semi-permeable eo ambany tsindry, ny sira sy ny mineraly tafahoatra ao anaty ranomasina dia voasakana eo amin'ny tsindry avo ary avoaka miaraka amin'ny ranomasina mifantoka, ary mivoaka ny rano madio avy amin'ny lafiny tsindry ambany.
Raha ny filazan'ny National Bureau of Statistics, ny totalin'ny loharanon-karena amin'ny rano any China dia 2830,6 miliara metatra toradroa tamin'ny taona 2015, izay mitentina 6% amin'ny loharanon'ny rano manerantany, mitana ny laharana fahefatra manerantany. Na izany aza, 2.300 metatra toratelo monja ny loharanon-drano fisotro per capita, izay 1/35 monja amin'ny salanisan'izao tontolo izao, ary tsy ampy ny loharanon'ny rano velona voajanahary. Miaraka amin'ny fanafainganana ny indostrialy sy ny fanamorana ny tanàna, ny fandotoana ny rano velona dia matotra indrindra noho ny rano maloto amin'ny indostria sy ny loto anaty tanàn-dehibe. Ny fanesorana ny ranomasina dia antenaina ho làlana lehibe hanampiana rano fisotro avo lenta. Ny indostrian'ny fanondrahana ranomasina ao Shina dia mampiasa 2/3 amin'ny totaliny. Hatramin'ny volana desambra 2015, dia misy tetik'asa fanesorana ranomasina 139 naorina manerana ny firenena, miaraka amin'ny ambaratonga 1.0265 tapitrisa taonina / isan'andro. Ny rano indostrialy dia mitentina 63,60%, ary ny rano ipetrahana dia 35,67%. Ny tetikasa fanapariahana eran-tany dia manome rano fisotro (60%) ary ny rano indostrialy dia 28% ihany.
Tanjona iray lehibe amin'ny fampivoarana ny teknolojia fanodinana ranomasina ny fampihenana ny vidin'ny asa. Amin'ny firafitry ny vidin'ny asa, ny fanjifana angovo herinaratra dia mitaky ny ampahany betsaka indrindra. Ny fampihenana ny fanjifana angovo no fomba mahomby indrindra hampihenana ny vidin'ny famoahana ny ranomasina.
Sivana fanadiovan-drano Ro Well, Ro faritra sivana amin'ny rano, Rafitra fanivanana rano matihanina, Sodium Hypochlorite System Design, Fomba fizotran-tany Ro, Ranomasina mankany amin'ny masinina fisotro rano,